Nice Precision Myanmar – Furniture Manufacturer in Yangon
For your constructions, offices, homes, schools and restaurant
Our skillful designers and engineers could design and create high quality furnitures
We admit you to get satisfaction in our works for your glorious buildings
Can provide various doors, windows and furniture according to customer requirement.
Nice & Precise ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကို မြန်မာပြည်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ခေတ်မှီ ခိုင်ခံ့ လှပသော တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက်အမျိုးမျိုး၊ ပရိဘောဂပစ္စည်း အမျိုးမျိုးတို့ကို မှန်ကန်သောဈေးနှုန်း၊ အာမခံသော အရည်အသွေးတို့ဖြင့် မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းလုံးကို ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချပေးနေသော ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Nice & Precise ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှ လူကြီးမင်းတို့၏ အဆင့်မြင့် အဆောက်အဦးများ၊ လူနေအိမ်များ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ ရုံးခန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်များအတွက် လိုအပ်သော ပရိဘောဂအမျိုးမျိုး၊ ပြတင်းပေါက်အမျိုးမျိုးနှင့် တံခါးအမျိုးမျိုးတို့ကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျသည်အထိ အာမခံမှုအပြည့်အဝရှိသော အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့် နည်းပညာတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ပေးနေပါပြီ။
လူကြီးမင်းတို့၏ ခေတ်မှီခိုင်ခံ့လှပ၍ ဂုဏ်ကျက်သရေရှိသော အဆောက်အဦး အမျိုးမျိုးတို့အတွက် အခန်းတွင်း ပရိဘောဂအမျိုးမျိုးတို့ကို ထည့်သွင်းရန် တိုင်းတာတွက်ချက်ပေးခြင်း၊ လိုအပ်သော ဒီဇိုင်းအတိုင်း ကျွမ်းကျင် အင်ဂျင်နီယာများ ဒီဇိုင်နာများက ရေးဆွဲတွက်ထုတ်ပေး၍ ပရိဘောဂအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် အလှဆင်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းအထိ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။
လက်လီ၊ လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလိုသော အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှ မိတ်ဆွေများကိုလည်း ဝမ်းသာလှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။
Nice & Precise Company Limited established in 2019 in Myanmar, it is the authorized company for supplying and distribution doors, windows and furniture with correct price and Quality Insurance in all over the Myanmar.
Nice & Precise Company Limited manufactures and supplies various doors, windows and furniture for your constructions, offices, homes, schools and restaurant with High Quality, Full Guarantee and Trendy Technology.
Our skill full engineers and designers will design and calculate the quote for various doors, windows and furniture according by customer requirement. We admit you to get satisfaction in our works for your glorious buildings.
We warmly welcome our retail and wholesale customers in various regions.
Be trying with full responsibility for your trust!
The authorized company for supplying and distribution doors, windows and furniture with correct price and Quality Insurance in all over the Myanmar.
Factory : No (142), U Ta Yuoat Gyi Street, Industrial Zone(4), Hlaing Thar Yar Tsp,Yangon.
Telephone: +9599631 62822, +959430 66733
Email : info@niceprecisionmyanmar.com
© Nice Precision Myanmar 2019. Developed by Logika